Ny hazakaza-tsoavaly tsara indrindra eto an-tany sy amin'ny tantara | Soavaly Noti
Carlos Garrido | | Fifaninanana soavaly
Haingam-pandeha tokoa ny hazakaza-tsoavaly. Fijerena madio amin'ny lafiny rehetra, izay mampiakatra ny fihetsem-po sy manantona ny olona rehetra manapa-kevitra ny ho vavolombelona. Mety ho io no antony lehibe nitomboan'ny karazan'ireny hetsika ireny hatramin'ny niandohany taona maro lasa izay. Na izany aza, araka ny efa nolazainay, dia fampisehoana ho azy io, ary ny seho tsirairay dia misy mpilalao fototra sasany izay tena ilaina. Amin'ity tranga ity dia mazava ny hoe iza izy ireo, ary avy eo dia hampahafantatra anao izahay ny hazakaza-tsoavaly tsara indrindra teo amin'ny tantara.
Azo antoka fa ny sasany amin'ireo soavaly hotononinay dia efa fantatr'izy ireo ary ho fantatr'izy ireo aza ny ampahany lehibe amin'ny fiainany satria ny sasany amin'izy ireo dia lasa toetra mifandraika amin'izany.
1 Fara Lap
Azo lazaina fa miatrika ny iray amin'ireo soavaly malaza indrindra isika, tsy amin'ny sehatry ny hazakazaka ihany, fa amin'ny lafiny rehetra. Iray amin'ireo biby izy io ny ankamaroan'ny solontenan'i Aostralia sy Nouvelle ZélandeRaha ny marina, ny fatiny dia zaraina ho fampirantiana ao amin'ny tranombakoka telo lehibe indrindra amin'ny firenena roa tonta.
Nantsoin'izy ireo hoe ny "Mena Mena", anarana iray izay nanisy firesahana ny amin'ny toetra matanjaka ara-batana nananany: fiaretana, tanjaka, haavo lehibe ary hafainganan'ny devoly. Izany rehetra izany dia nanampy ny palitaony chestnut. Marina tokoa, nampiharihary ny tarehiny.
Mifanohitra amin'izany fa tsy ny tsara indrindra vitany tamin'ny naha-mpamily hazakazaka azy, satria izy no ambany indrindra tamin'ny hazakazaka voalohany nandraisany anjara. Nefa hoy ny fitenenana hoe "tsy ny fomba fanombohany fa ny fiafarany." Taorinan'ny fanombohana tsy dia tsara dia nihatsara be ny fampisehoana nataony, hatreto mandresy tanteraka ny zava-drehetra amin'ny faramparan'ny roapolo taona.
Ny maha-zava-dehibe azy dia ny tsy maintsy nandraisan'ny olona akaiky ny filokana mihitsy aza. Ny fiafaran'ny tantarany dia tamin'ny 5 aprily 1932 rehefa nanana fahafatesana somary hafahafa izy rehefa nandray anjara tamin'ny fifaninanana tany amin'ny kaontinanta amerikana. Betsaka no nino fa a no nahatonga ny fahafatesany fanapoizinana.
Rehefa miresaka momba ny soavaly fanatanjahan-tena any Etazonia, ny anaran'i John Henry dia tonga hatrany am-piandohana, olona matotra izay nanamarika vanim-potoana iray noho ireo zava-bitany manan-danja tamin'ny taona valopolo.
Anisan'ny zava-bitany rehetra dia ilaina ny manasongadina ny zava-bitan'ny loka ho Horse of the Year tamin'ny 1981 sy 1985, ary ireo fotoana dimy nahafahany nanambara ny tenany ho Tompondakan'ny zokiolona any Etazonia. Nandresy tamin'ny fandresena 39 tamin'ny 83 nilalaovany izy, zavatra izay nidika vola be sy tombony ara-bola malala-tanana.
Ny fisotroan-dronono dia tamin'ny 21 Jona 1985, nateraky ny ratra mafy sy mahatsiravina tamin'ny iray tamin'ireo tadiny izay nanakana azy tsy hanohy hanao ny haavo takiana amin'ny soavaly manana ny toetrany.
Tsy mora ny fanatanjahantena. Tsy dia manintona anao foana ny vintana ary misy fotoana rehefa eo an-tampon'ny tamponao ianao dia tapaka tsy fahombiazana ny asanao. Izany no toe-javatra tany Bárbaro, iray amin'ireo fahatsapana lehibe indrindra tamin'ny hazakazaka am-pitandremana amerikana tany am-piandohan'ny taona 2000.
Taorian'ny nahazoany ny anaram-boninahitra tamin'ny Kentucky Derby tamin'ny 2006, nitodi-doha nankany amin'ny tsatòkan'ny Preakness mba hikaroka ny fanitarana ny rakitsorany. Saingy lavitra ny voninahitra, ny hitany dia vaky volo lehibe tamin'ny tongony havanana izay nanakana azy tsy handray anjara. Taty aoriana dia tsy maintsy nandalo fandidiana maromaro izy mba hialana amin'ny lahatra miandry ny soavaly rehetra tratry ny karazana ratra: ny fahafatesan'ny sorona. Mampalahelo fa tsy nahomby ireo fitsabahana ary tsy nahatratra ny tanjona lehibe kokoa, andro vitsivitsy taty aoriana voatery natao sorona mifanohitra amin'ny sitrapon'ny be.
Loza iray lehibe ho an'ny iray amin'ireo soavaly be fanantenana indrindra tamin'izany fotoana izany, izay tsy nisy valindrihana.
Ny sekretera dia iray amin'ireo soavaly nanamarika ny taloha sy ny taorian'izay. Efa eo am-piandohany, izay nandresy tamin'ny 7 tamin'ny hazakazaka 9 izay nifaninanany sy dia notendrena ho Horse of the Year, nanamafy fa ny iray dia talohan'ny biby manokana sy tsy manam-paharoa.
Baribariana ny fandrosoany, ary Tamin'ny 1973 dia nambara fa mpandresy tamin'ny Triple Crown izy Etazonia, zava-misy ara-tantara satria tsy nisy mihoatra ny 25 taona lasa izay hatramin'ny nahavitana asa farany toy izany. Nisy rakitsoratra hafa iray hafa azony vaky ihany koa nitranga tao Belmont, izay nitondrany ilay jack tany anaty rano tamin'ny enina tamin'ireo hetsika sivy nandraisany anjara. Tamin'ny faran'io taona io ihany dia nisotro ronono izy ka lasa soavaly soavaly.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra antsika dia manasongadina zava-misy roa momba ny Secretariat izahay. Ny voalohany amin'izy ireo dia satria nanana fo avo roa heny noho ny soavaly mahazatra, izay nahagaga azy. Ny iray hafa dia izy dia voafidy ho iray amin'ireo atleta tsara indrindra tany Amerika., fibodoana ny laharana 35 ao amin'ny lisitra.
Ireo, araka ny hevitray, no hazakaza-tsoavaly tsara indrindra teo amin'ny tantara. Amin'izy ireo dia azontsika ampiana ny anaran'ny maro hafa izay nitana andraikitra nitana andraikitra koa, toa ny Smarty jones o Amiraly Ady.
Hatraiza ny dia azon'ny soavaly mandeha?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » fitsipika » Fifaninanana soavaly » Ny hazakaza-tsoavaly tsara indrindra teo amin'ny tantara
Marengo, soavalin'i Napoleon